Sleeping Habits – စာမကျြနှာ4– Healthy Life Journal
————၊ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊————- Q. တညတလေ အိပ်မပျော်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ တချို့သူတွေက လနဲ့ချီပြီး၊ တချို့က နှစ်နဲ့ချီပြီး အိပ်မပျော်တာတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို နာတာရှည်အိပ်မပျော်တာက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ A. အိပ်မပျော်ဘူးဆိုတာက အိပ်စက်မှုကာလမှာ အပိုင်းလိုက်ပြောရပါမယ်။...
ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်ခြင်းကြောင့် ရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူးများ
————-၊ စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊————— ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိစေပါတယ်။ (၁) ဟောက်တာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ (၂) အစာများများစားပြီးနောက် အစာကြေတာကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ (၃) ခါးနာတာနဲ့ လည်ကုပ်နာ/ဇက်ကြောတက်တဲ့ဝေဒနာကို သက်သာစေပါတယ်။ (၄) ကိုယ်တွင်းအဆိပ်အတောက်၊ ခန္ဓာကိုယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ သားနံရည်တွေကို...
အကောင်းဆုံးအိပ်စက်ခြင်း ပိုင်ဆိုင်စေမည့် နည်းလမ်းကောင်း ၁၂ သွယ်
(၁) အေးမြတဲ့ အခန်းအပူချိန်ရှိပြီး မှောင်တဲ့အခန်းထဲမှာ အိပ်စက်ပါ။ (၂) အိပ်ရာဝင်ချိန်ကို ညတိုင်း အချိန်အတူတူထားရှိပါ။ (၃) အိပ်ရာမ၀င်ခင် အပြာရောင်အလင်းတန်း (ဥပမာ-ဖုန်းစကရင်ကထွက်တဲ့ အလင်းတွေကို ရှောင်ပါ။ (၄) သန်စွမ်းအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ (၅) ဒူးနှစ်ဖက်ကြား ခေါင်းအုံးတစ်ခုခံပြီး အိပ်စက်ပါ။...
သင့်မှာ အိပ်စက်မှုအကြွေး ဘယ်လောက်ရှိသလဲ
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နေ့ခင်းမှာ သင်ဘယ်လောက်အိပ်သလဲ၊ ဘယ်လို အိပ်ငိုက်သလဲဆိုတာသိအောင် အောက်ပါအခြေအနေတွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ ဒီအခြေအနေတွေက သင်အိပ်ရေးဝသလား၊ အိပ်ဖို့ လိုအပ်နေသလားစတာတွေကို သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ထိုင်ခြင်းနှင့် စာဖတ်စဉ် အိပ်ငိုက်ခြင်း – လုံးဝ မဖြစ်ပါ...
အိပ်ရင်း ဟောက်တတ်သူတို့အတွက် သဘာဝ အိမ်တွင်းကုထုံးများ
– မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ ဟောက်သံကျယ်ကျယ်ကြောင့် အိပ်မရဖြစ်နေပြီလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကဟောက်သံကျယ်ကျယ်ထွက်တတ်လို့ တခြားအိမ်တွေမှာအိပ်ဖို့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေသလား။ အိပ်ရင်းဟောက်တာက အိပ်မပျော်တာကိုဖြစ်စေသလို အိပ်စက်တဲ့စနစ်ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ရင်းဟောက်တာကို သက်သာလျော့ပါးစေမယ့် အိမ်တွင်းသဘာဝနည်းတွေကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ (၁) ပူစီနံဆီသုံးကြည့်ပါ လူတစ်ယောက်က...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အိပ်ပျော်နေရာကနေ ညသန်းခေါင်ချိန်မှာ ရုတ်တရက် လန့်နိုးလာပါသလား။ ညည အိပ်ရင်း မိုးမလင်းသေးဘဲ လန့်နိုးလာတာကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပါသလား။ ညဘက်အိပ်ရင်း လန့်နိုးတဲ့အခါ ပြန်အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အတွက် လန့်နိုးစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို သိနားလည်ပြီး ဆင်ခြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။...